Madaxweynaha Jabuuti oo dhigiisa Mareykanka kala hadlay amaanka Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Washington – Mareeg.com: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Mareykanka ayaa la kulamay madaxweynaha dalkaas, Barack Obama.
Kulanka labada madaxweyne oo ka dhacay aqalka cad ee dalka Mareykanka ee magaalada Washington ayaa looga wada hadlay arrimo dhowr ah oo uu ka mid yahay amaank Soomaaliya.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa VOA u sheegay in isaga iyo Barack Obama ay ka wada hadleen arrimaha aminga, horumarinta, iyo xaaladda Somalia.
Mr. Geelle ayaa sheegay in baahida ugu weyn ee loo qabo in Soomaaliya ay guuleysato ay ku xiran tahay in la qalabeeyo lana xoojiyo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya si ay uga adkaadaan Alshabaab.
Dhanka kale, isagoo la hadlay BBC ayuu madaxweyne Geelle sheegay in haddii aan la xoojin ciidamada Soomaaliya aaney suuragl noqon doonin in sanadka 2016 doorasho ka dhacdo Soomaaliya.
Wuxuu sheegay Madaxweyne Geelle inuu u sheegay dowladda Mareykanka iney lagama maarmaan tahay in la xoojiyo ciidamada Soomaaliya si ay dalka gacanta ugu wada dhigaan.
“Waxaan kala hadlay Obama xaaladda amaan ee Soomaaliya iyo in la xoojiyo milateriga Soomaaliya” ayuu yiri madaxweyne Geelle oo intaas raaciyey in Jabuuti aaminsantahay inaan 2016 Soomaaliya aysan ka dhic Karin doorasho madaxtinimo haddii xaalku sidan kusii socdo.
Madaxweynaha ayaa hoosta ka hariiqay in Jabuuti tababar siiyeen ilaa 1000 askari oo Soomaali ah, kuwaasoo la howlgala 1000 ka tirsan ciidamada Jabuuti oo ku sugan Soomaaliya.
Mar madaxweyne Geelle oo wax laga weydiiyey iney jiraan dano kala duwan oo ay Soomaaliya ka leeyihiin dalalka Afrika ee ciidamada soo diray ayaa isagoo qoslaya ku celceliyey “Taas miyaan ka jawaabi karayaa”.
Wuxuu xaqiijiyey madaxweyne Geelle in Jamhuuriyadda Jabuuti aysan dooneyn in ciidamadeedu sii joogaan Soomaaliya, sidoo kale Jabuuti aysan dooneyn in ciidamada kale ee AMISOM sii joogaan Soomaaliya, ayna doonayaan in dalka si degdeg ah loo nabadeeyo, dabaeedna ciidamada Afrika Soomaaliya ka baxaan.
Dowladda Jabuuti ayaa ah dowlad walaal la ah Soomaaliya, waxaana madaxweynaha dalkaas doonayaa in Soomaaliya nabad noqoto, halka dalalka kale ee ka howlgala Soomaaliya qaarkood looga shaki qabo iney wataan qorshayaal u gaar ah.